Akụkọ - JinJiang Footwear & Egwuregwu ụlọ ọrụ Expo
JinJiang akpụkpọ ụkwụ & Egwuregwu ụlọ ọrụ Expo
N'April 19, 2021, ụlọ ọrụ China (Jinjiang) International Shoes Industry na 23 nke International Sports Industry Expo ga-agbanyụ ọzọ na Jinjiang City, Fujian Province, nke a maara dị ka "China's Shoes Capital".
Ọgaranya mgbe ihe karịrị afọ 20, accumulative ngụkọta ngosi ebe nke ihe karịrị 710000 square mita, ihe ngosi sonyere ọkachamara na-ege ntị n'ụwa nile karịa 70 mba na mpaghara yana ọtụtụ narị anụ ụlọ obodo, ndị exhibitors n'ụwa nile, na-egosi Atiya. zuru oke, ọrụ na saịtị, ọrụ ndị dị mkpa bara ọgaranya ma mara mma, a na-eto ya dị ka otu n'ime ihe ngosi "China top iri amara amara".
N'October 2017, Jinjiang meriri ikike ịnabata egwuregwu ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke 18 nke ụwa, na-aghọ obodo nke abụọ na-esote Shanghai ga-akwado egwuregwu ahụ. Ijide egwuregwu ụwa nke 2020 ga-akwalite mgbanwe na nkwalite na ịkwalite mmepe nke ụlọ ọrụ egwuregwu na Jinjiang, na-eme ka ụmụ akwụkwọ sekọndrị nde 85 na China soro na-eme egwuregwu ụlọ akwụkwọ sekọndrị, na-akwalite mgbasawanye na mmepe nke etiti etiti. egwuregwu ụlọ akwụkwọ na ụwa, na-ewetakwa nnukwu ọchịchọ ahịa na ohere mmepe maka ụlọ ọrụ ahụ. N'oge ememe ncheta 20th nke ihe ngosi ahụ, kọmitii na-ahazi ga-eme mgbalị iji meziwanye ebumnuche nke itinye ego na njikọ, na-achịkọta ihe ndị ọzọ dị elu nke ụlọ ọrụ egwuregwu, na-eme mgbalị ọ bụla iji mepụta ọnọdụ dị mma maka ndị ọrụ ibe na ụlọ ọrụ ahụ. iji gosi ike ha, weghara ohere azụmahịa, wusie ike imekọ ihe ọnụ na ịchọ mmepe nkịtị.
Ka anyị mma, Ọdịnihu ka mma. Ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ mba ụwa nke 23 nke China (Jinjiang) na Expo nke ụlọ ọrụ egwuregwu mba ụwa nke isii ga-enye gị mmemme egwuregwu dị ebube, pụrụ iche na ume!